FAALLO : Puntland iyo Hirgelinta Nidaamka Dimuqraadiyadda.
March 25, 2015 - Written by Puntland Fox
Puntland waxaa ay dhabada toosan u saaran tahay in laga dhabeeyo si wanaagsana loo hirgeliyo Nidaamka dimuqraadiyeynta oo faa’iido weyn ugu jirta shacabka reer Puntland oo ah shacab u bisil ka faa’iidaysiga barnaamijkaasi.
Nidaamka dimuqraadiyeeynta ee larabo in laga hirgeliyo Puntland waa nidaam ay dadka Puntland muddo badan ku taamayeen hirgelintiisa, waana mid waafaqsan diinta islaamka, shareecada iyo qawaaniinta udagsan dalka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa uu hada uu suxul duub ugu jiraa sidii uu u hirgelin lahaa dimuqraadiyeynta Puntland si uu ufuliyo balanqaadkiisi ahaa in dadka Puntland heleyaan cadaalad iyo sinaan.
Barnaamijka dimuqraadiyeeynta Puntland waa mid soo kordhinaya in Nidaamka dawladeed ee Puntland uu noqdo mid loo wada siman yahay ka qeyb-galkiisa, sharciguna uu noqdo mid ciskasta ka sareeya .
Sidookale waxaa uu sahlayaa ama uu fududeynayaa in kheyraadka dalka uu noqdo mid loo wada simanyahay si wadajir ahna looga faa’iidaysto, fursadaha shaqo, caafimaad iyo waxbarashana waxaa ay noqnayaan kuwo loo wada siman yahay.
Dimuqraadiyadda waxay ka kooban tahay afar qeybood oo asaasi ah, afartaan qeybood waa tiirarka ugu muhiimsan ee dimuqraadiyadda.
1. Dimuqraadiyadda waa nidaam siyaasadeed oo ay xukuumadaha isku bedelaan ka dib doorasho xor ah oo caddaalad ah.
2. Waa nidaam siyaasadeed oo ay dadweynahu si firfircoon uga qeyb qaataan siyaasadda.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaa ka go’an hirgelinta jawiga iyo qaanuunka lagu meelmarinayo dimuqraadiyadda Puntland, iskusina looga hirgeliyo dhammaan Gobolada Puntland.